‘बोलेर होइन, काम गरेर देखाउँछु’ - संवाद - नेपाल
‘बोलेर होइन, काम गरेर देखाउँछु’
प्रदेश ६ को एक्लो महिला मेयरका रुपमा कान्तिका सेजुवाल, ४४, ले चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्लामा जित हासिल गरेकी छन् । दुई दशक लामो शिक्षण पेसा छाडेर सक्रिय राजनीतिमा आएकी उनले नगरको भौतिकसँगै सामाजिक रुपान्तरणमा काम गर्ने बताएकी छन् । उनी फागुन ०७० मा जहाज दुर्घटनामा निधन भएका नेपाली कांग्रेस, जुम्लाका तत्कालीन सभापति मानव सेजुवालकी धर्मपत्नी हुन् । चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिकासँग गरिएको कुराकानी :
चन्दननाथको मेयर जितेर इतिहास रच्नुभयो नि ?
खुसी छु । तर, चुनौतीका पहाड देखेर चिन्तित पनि छु । पार्टीले टिकट दियो । मतदाताले माया गरे, पत्याए । अब नगरलाई कसरी हाँक्ने भन्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ ।
म अलि कडा स्वभावकी पनि छु । हिजो सामाजिक संघसंस्था चलाउँदा होस् वा स्कुलको प्रधानाध्यापिका हुँदा, रातभर सोचेर योजना बनाएर भए पनि काम गर्थें । आफूले नेतृत्व गरिसकेपछि उत्कृष्ट काम हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
आफ्नो नगरमा के–कस्ता काम गर्ने सोचाइ बनाउनुभएको छ ?
चुनावका बेला धेरैले धेरै खाले सपना देखाए । मचाहिँ एकपटकमा एउटै सपना देख्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । समस्या त धेरै छन् । तिनको समाधान गर्ने उपाय पनि पक्कै धेरै छन् । म चन्दननाथलाई स्मार्ट सिटी बनाउनेछु ।
अरू प्राथमिकता के–के छन् ?
व्यवस्थित चक्रपथ बनाउनेछु । पुरानो बजार र बस्ती भत्काउनुपरे टाउन प्लानिङ गरेर जाने सोच छ । सबैभन्दा पहिले जुम्लालाई उज्यालो नगर बनाउनु छ । अरू पनि धेरै योजना छन्, ती बोलेर भन्दा पनि काम
गरेर देखाउनेछु ।
तपाईंले सबैभन्दा पहिले त भौतिक विकासभन्दा पनि महिला तथा सामाजिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने होइन र ?
महिलाहरूले धेरै आशा गरेका छन् । ‘मेडम नबिर्से है’ भन्छन् । कर्णालीका महिला वर्षौंदेखि विभेदमा छन् । धेरैले छोरालाई पढाए पुग्छ भन्ने ठान्छन् । महिलाले १८ घन्टा काम गर्नुपर्छ । छाउपडी प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह र जारी प्रथा अझै छ । आर्थिक र सामाजिक भेदभावको संरचना भत्काउनु छ ।
लैंगिक विभेदको संरचना भत्काउन के गर्नुहुन्छ ?
सामाजिक रूपान्तरणका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छ । उपमेयर पनि माओवादी केन्द्रबाट महिला (अप्सरा न्यौपाने) नै विजयी हुनुभएको छ । घरेलु हिंसामुक्त, महिलामैत्री स्थानीय तह र नेतृत्व विकासका लागि हामी मिलेर काम गर्छौं ।
यो सफलताको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
मेरा स्वर्गीय पतिलाई । यतिबेला एकदमै मिस गरिरहेकी छु । मैले चुनाव जित्दा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र मतदाता सबैका लागि खुसीको क्षण थियो । तर, मेरो एउटा आँखामा खुसी र अर्को आँखामा दु:खका आँसु थिए । मतदाताले मलाई मात्र भोट दिएका होइनन् । उहाँ (मानव)लाई पनि सम्झेका हुन् ।